Shir ay iskugu yimaadeen Dhamaan Hayadaha Islaamiga ah ayaa ka qabsoomay Xarunta Wasaaradda Qorshaynta
High level aid coordination Forum (HLACF)
Shirkan oo u gudoominayay Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Somaliland Mud. Maxamed Ibraahim Aden (Qabyo tire) ayaa waxa ku wehelinayey Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, Agaasimaha Waaxda isu-duwida ee Wasaaradda, La taliyaha Wasaaradda ee dhinaca Hayadaha isalaamiga iyo xubin ka socday gudida taakulaynta abaaraha ee heer qaran.
ujeedada shirkan ayaa ahayd sidii la islula eegi lahaa ka qayb qaadashada taakulaynta dadka ka soo doogay abaaraha iyo sidii ay hayadahani u soo gudbin lahaayeen qorshayaashooda mashaariicda ay ugu talagaleen taakulaynta dadka abaaruhu ay saameeyeen.
Waxa kale oo waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkan lagaga wada hadlay ka mid ahaa Xoojinta xidhiidhka wada shaqayneed ee ka dhaxeeya Wasaaradda iyo Ururada isalaamiga.
Kulankan ayaa intii uu socday waxa warbixino iyo falanqayn iswaydaarsaday ka soo qaybgalayaasha, waxaana la isla qaatay in hayadaha islaamiga ahi ay ka qaybqaataan qaadhaanka loogu talagalay dadka jilicsan ee abaarahu saameeyeen.Waxa kale oo la isla meel dhigay in mudo todobacasha ah ay ku soo gudbiyaan hayadaha islaamiga ahi qorshahooda ku aadan mashaariicda taakulaynta iyo wixii qaadhanaba.
Waxa kale oo kulanka la isku afgartay in Wasaaradda Qorshayntu ay soo saari doonto baaq heer qaran ah oo ku waajahan samato-bixinta iyo gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen si la iskula jaan qaado, waxaanay Wasaaradda Qorshayntu soo saari doonto Wareegto ku saabsan habka dabagalka iyo qiimaynta mashaariicda
Waxa gabagabadii halkaasi ka hadlay xubno ka socday hayadaha islaamiga oo ka dareen celiyey kulanka kuna timaamay mid midho dhal noqon doona iyagoo balan qaaday inay si buuxda ula shaqayn doonaan Wasaaradda.
Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Somaliland Mud. Maxamed Ibraahim Aden (Qabyo tire) oo kulankan soo xidhay ayaa ugu horeyn uga mahadnaqay ka soo qaybgalayaasha, waxaanu ku dheeraaday sida loo dardargalin doono imika wixii ka danbeeya wada shaqaynta labada dhinac.
Waxaanu halkaas Wasiirku ka sheegay qodobada la isla qaatay oo ay ugu muhiimsanayeen
- Xoojinta xidhiidhka wada shaqayneed ee ka dhaxaynayaa Wasaaradda iyo Ururada isalaamiga
- Dajinta nidaam laba geesood ah oo ay kuwada shaqyn doonaan labad dhinac.
- Meelaynta iyo qaabaynta mashaariicda
-Qiimaynta iyo dabagalka Mashaariicda ay ka wadaan dalka hayadaha islaamiga ahi
Address: Sha'ab area. Road No.1, www.slministryofplanning.org Contact: info@slministryofplanning.org
© 2018 Ministry of Planning